မနေ့ကတင်ထူး(ခေါ်)တင်မောင်၏ခေတ်ပြိုင်ဦးတင်မောင်ဝင်း ကို ဦးသုဝေအားမေးမြန်းခန်းနှင့်ပတ်သက်၍
သည့်ကပ်ဖားလျက်စားများအတွက်သာအရိုးအကျွင်းအကျန်ကိုက်ခွင့်ရမည်သာဖြစ်ပြီးအတိုက်အခံအင်အားစုတ ခုလုံး၊တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရပ်လုံးအတွက်မူမည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးမျှရလာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပေ။ဤရွေး ကောက်ပွဲဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းသည်နှစ်၅၀ကျော်ကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရသောမြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခက်အခဲအကြပ်
တင်ထူးရေးသည်စာထဲတွင်..(ခုအခါမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ် ဆိုသူတွေကိုယ်တိုင် ဒီမိုကရေစီ
ကျင့်စဉ်ထဲက သွေဖီပီး ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ မူကို ဆုတ်ကိုင် နေကြပါတယ်။ ).......လို့ရေးထားတယ်။
၍ငြင်းခုန်ခွင့်မရသေးသည့်အချိန်ကာလသမယ၊သန်းရွှေဖက်ကစ၍ ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ မူကို စတင်ဆုတ်ကိုင် ကာဒေါ်စု၊မင်းကိုနိုင်၊ဦးခွန်ထွန်ဦးတို့ကိုဖိနှိပ်ထောင်ချခဲ့သည်၊(အမှန်တော့စကားယှဉ်မပြောနိုင်၍ရှက်ရှက်နှင့်ထောင်ချခြင်း)
("စစ်ဦးစီးချုပ်" သည် နိုင်ငံတော်ရဲ့ အထက်၊ ဥပဒေရဲ့ အထက်၊ နိုင်ငံသား အားလုံးရဲ့ အထက်မှာ ရှိနေပြီး ပြည်သူ လူထု ဆန္ဒကိုလည်း အတင်း အဓမ္မ တောင်းခံ အတည် ပြုခဲ့သော နအဖ စစ်အစိုးရ၏ 'ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ (၂ဝဝ၈)' ကို ကျနော်တို့ လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ထိုအခြေခံ ဥပဒေနှင့် နောက်ဆက်တွဲ ဆောင်ရွက်မှု အဆင့်တိုင်းကို နည်းလမ်း ပေါင်းစုံဖြင့် ဆန့်ကျင် တိုက်ဖျက်သွားမည် ဖြစ်သည်။)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/02/20092အကြံပြုခြင်း
ရက်စွဲ-၃၊ ၁၅၊ ၂ဝဝ၉
၁၉၈၈-ခုနှစ် တနိုင်ငံလုံး လူထုအုံကြွမှုကို စစ်တပ်မှ အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းကာ စက်တင်္ဘာ ၁၈-ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံ တော်အာဏာကို သိမ်းယူလိုက်ပြီးသည်နောက် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန်အတွက် နိုင်ငံရေးပါ တီများကို ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ယင်းကြောင့် ၁၉၈၉-ခုနှစ်တွင် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။
၁၉၉ဝ-ခုနှစ် မေလ(၂၇)ရက် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ပါလီမန် အမတ်(၁၁)နေရာ အနိုင်ရပြီး ရခိုင်ပြည်တွင် မဲဆန္ဒအများဆုံးဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သော ပါတီဖြစ်သည်။ နဝတမှ ၁/၉ဝ အမိန့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သောကြောင့် နဝတမှ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ပိတ်ပင်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
၁၉၉၃-ခုနှစ်တွင် ပါတီမှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မီတီဝင် အချို့သည် ပြည်ပသို့ တိတ်ဆိတ်စွာ ထွက်ခွါလာပြီး ပါတီ၏ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်အကောင်းအထည် ဖေါ်ဆောင်နိုင်ရန်နှင့် ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်အင်အား စုများနှင့် လက်တွဲပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်အား တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ရန်အတွက် ၁၉၉၄-ခုနှစ်တွင် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်(ပြည်ပ)ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ၌ ဖွဲ့စည်းပြီး အနာဂါတ် နိုင်ငံရေးမူဝါဒနှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ချမှတ်နိုင်ခဲ့သည်။
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအချုပ်(ပြည်ပ)အမေရိကန်ဌါနခွဲကို ၁၁၊ ၂၇၊ ၂ဝဝ၄-ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ ၃၊ ၁၅၊ ၂ဝဝ၉-နေ့တွင် တတိယအကြိမ် အလုပ်မှုဆောင်ကော်မီတီကို ရွေးချယ်ခဲကြသည်။ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(ပြည်ပ) အမေရိကန် ဌါနခွဲ အနေဖြင့်၊ ၁၉၉ဝ-ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပြီး တိုင်းရင်းသား အမျိုးသားများအတွင်း နိုင်ငံရေး တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ့်ကြမ္မာကို ဖန်တီးခွင့် အပြည့်အဝရှိသော စစ်မှန်သည့် ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် မဟာမိတ်ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများနှင့် လက်တွဲကာ ပြတ်သားစွာ တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(ပြည်ပ) အမေရိကန်ဌါနခွဲမှ အောက်ဖေါ်ပြပါ နာယကအဖွဲ့နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မီတီဝင်များကို ရွေးချယ်ပြီး၊ အောက်ပါ နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက်များကို ချမှတ်ခဲ့ကြသည်။
1) To establishafree democratic federal state of Burma
2) To rebuilt the Rakhing language, culture and tradition
3) To reclaim the lost ancestral territory of Rakhing land
4) To salvage the Rakhing who are suffering under the present Burma military
5) To demand that the political prisoners Daw Aung San Suu Kyi and U Tin Oo and all other political prisoners be freed.
1.���Dr. Ashin Nayaka
2.����� Dr. Aye Kyaw
1.����� Myint Maung Htay
2.����� Thein Tun Zan
3.����� Tint Way
4.����� Khaing Ba Khin
Executive Committee USA:
1.����� Myint Maung Htay (Chairman)
2.����� Tint Way (Vice Chairman)
3.����� Kyaw Win Zan (Vice Chairman)
4.����� Htin Kyaw Lin (Secretary)
5.����� Ba Thant Zin (Secretary)
6.����� Tun Win
7.����� Ne Mar Lwin
9.����� Khine Naing
10.� Kyaw Kyaw
11.� Naing Kyaw
12.� Aung Myat Soe
13.� Khaing Ba Khin
14.� Thein Tun Zan
15.� Tun Kyi Tun
16.� Maung Khin Than
17.Than Sein Min
Arakan League for Democracy (In Exile)
22-30 Benson Avenue Suite A1, Brooklyn, New York, 11214, USA Tel: 1(718) 333-0801,
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/02/20090အကြံပြုခြင်း
အရိုက်ခံရသူ ဆရာ နယ်ပြောင်းရ ။ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း စင်းလုံးငှား လေယာဉ်လိုင်း ထောင်ရန်ပြင် ။မှတ်ပုံတင်မထားသော ဆေးဝါးများကို သုံးစွဲခြင်းဖြင့် အသက် အန္တရာယ် စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိ။အနီရောင်နှင့် လိမ္မော်ရောင် ဆိုးဆေးများကိုပါ အစားအစာများတွင် ထည့်သွင်း နေသည်ဟု သံသယ ဖြစ်ဖွယ်ရှိ။မြန်မာ့အရေး ၆ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးရန် အမေရိကန် အဆိုပြု ။သင်္ကြန်ကာလအတွင်း နိုင်ငံရေးနှင့်ဆိုင်သည့် အ၀တ်များမ၀တ်ရ ။အင်န်အယ်ဒီလူငယ်များ စာဖတ်ဝိုင်းဆက်။ကျနော် နှင့် ပြည်တော်ပြန်ခရီး (၁) ။ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်မှုကို ဟန့်တားရင် မြောက်ကိုရီးယား အင်အားသုံး တုံ့ပြန်မည် ။
လက်ဖက်အစိုတွင် သာမက လက်ဖက်ခြောက် များမှာပါ ဆိုးဆေးများ ပါဝင်နိုင်သောကြောင့် သတိပြု သောက်သုံးသင့် ဟုဆို
သင်္ကြန်ကာလအတွင်း သရုပ်ပျက် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ညစ်ညမ်း တေးဂီတများသီဆိုလျှင် ပြင်းထန်စွာ အရေးယူမည် Wednesday, April 01, 2009 7:00 AM
သင်္ကြန်ကာလတွင် သီဆိုဖျော်ဖြေကြမည့် အနုပညာရှင်များသရုပ်ပျက်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ညစ်ညမ်း"သောတေးသီချင်းများသီဆိုလျှင် ဂီတအစည်းအရုံးက ပြင်းထန်စွာအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဂီတ"အစည်းအရုံးက သင်္ကြန်ကာလချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များမှာ စင်ပေါ်တွင်သရုပ်ပျက်ဝတ်စား ဆင်ယင်ခြင်းမပြုရန်၊ နိုင်ငံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော
အ၀တ်အစားများ ၀တ်ဆင်ခြင်းမပြုရန်နှင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မကိုက်"ညီသော ညစ်ညမ်းသည့်တေးသီချင်းသီဆိုခြင်းမပြု ရန်စသည့် စည်းကမ်းချက်များကို သင်္ကြန်ကာလ မတိုင်မီက"ပင် ကြိုတင်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရသည်။ ယင်းစည်းကမ်းချက်နှင့် ပတ်သက်၍အနုပညာရှင်များကလိုက်နာ"ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုလျှင် “အရေးယူမှုကတော့သင်္ကြန်ကာလပြီးတာနဲ့ခေါ်တွေ့မယ်၊ပြီးရင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးRecord"တွေရှိတဲ့အတွက် အရေးယူသင့်ရင်ယူပါမယ်။ Record ဆိုတာကလဲ သင်္ကြန်ကာလအတွင်းမှာ သီဆိုဖျော်ဖြေထား"တဲ့ တေးစီးရီးအယ်လ်ဘမ်တွေထွက်လာရင်သူတို့ဘယ်လိုဝတ်စားဆင်ယင်ထားတယ်ဆိုတာ Record အနေနဲ့တွေ့"ရမှာပဲ။ ဂီတအစည်းအရုံးအနေနဲ့ကတော့ သင်္ကြန်ကာလအတွင်း လိုက်လံစစ်ဆေးခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ပေမယ့်သက်"ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ Record တွေကိုအစည်းအရုံးကိုတင်ပြရပါတယ်။ တင်ပြတာတွေကိုကြည့်ပြီးစည်း"ကမ်းဖောက်ဖျက်ရင် တော့ တေးစီးရီးထုတ်ခွင့်ရော၊ တေးသီချင်းဆိုခွင့်ပိတ်သည်အထိပါ ထိရောက်စွာ အရေးယူ"သွားမှာပါ” ဟုဂီတအစည်းအရုံးမှတာဝန်ရှိသူ ဦးသစ်မင်းကပြောသည်။ယခုကဲ့သို့စည်းကမ်းချက်များနှင့်ပတ်သက်"၍ယခင်နှစ် သင်္ကြန်ကာလအတွင်း၌ ယင်းကဲ့သို့စည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဂီတ အစည်းအရုံးက"လည်းထိရောက်စွာ အရေးယူခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင်"ဖော်ပြထားပါသည်။"
ဈေးကွက် အတွင်းရှိ အကြော်ခံ ဆီများ ကျန်းမာရေးကို များစွာ ထိခိုက်စေ
Wednesday, April 01, 2009 7:00 AM
ဈေးကွက်အတွင်း အတွေ့များရသော အကြော်ခံဆီများမှာ သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါနှင့်
အဝလွန်"ရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်သောကြောင့်ကျန်းမာရေးကိုဆိုးဝါးစွာထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ဗဟို"ကျန်းမာရေးပညာဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာခင်မောင်လွင်ကသတိပေးပြောကြားသည်။ “အကြော်ခံဆီဆို"တာက များသောအားဖြင့် စားအုန်းဆီ၊ ဓါတုပစ္စည်းတွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ အကြော်ခံဆီနဲ့ ကြော်ပြီးသားကျန်တဲ့ဆီ"ဆိုးတွေလို့ ပြောလို့ရတယ်။ အဲဒီဆီတွေကို ဆီမခန်းလွယ်အောင် ဆီ မပြန်လွယ်အောင် ပြုလုပ်ထားတာ။အဲဒီဆီ"တွေကို စားသုံးရင် သွေးကြောကျဉ်းတာ၊ သွေးကြောပိတ်တာ၊ အဝလွန်တာ၊ ဆီးချို ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများ"တယ်” ဟုဒေါက်တာခင်မောင်လွင်ကပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆီကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်သော အန္တရာယ်များအတွက် ပညာပေးလုပ်ဆောင်လာသည်မှာ
ဆယ်နှစ်ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်သော်လည်းနှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုး ရောဂါနှင့်"အဝလွန်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတိုးလာသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ ယင်းမှာဆီစားသုံးမှုများခြင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်"ဘဲ ဆီဆိုးနှင့် အကြော်ခံဆီများကိုစားသုံးကြ သောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာတွင် ဆီဆိုးများကို မသုံးစွဲ"အောင်နှိုးဆော်လာကြသကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း သတိပေးနှိုးဆော်သင့်ကြောင်း ၄င်းကဆိုသည်။ ပြည့်ဝဆီ"ဆိုသည်မှာ များသောအားဖြင့် အေးလျင်ခဲသွားတတ်သောဆီမျိုးဖြစ်ပြီး စားအုန်းဆီက ၅၀/၅၀ ဖြစ်၍ကျန်းမာရေ"ကိုထိခိုက်နိုင်ကြောင်း၊ ယင်းထက် ဆီဆိုး (အကြော်ကျန်ဆီ) များကပို၍ဆိုးကျိုးရှိကြောင်းဆီဆိုးစားသုံးခြင်းဖြင့်"ဝက်ဆီကိုစားသုံး၍ရသည့် ဆိုးကျိုးထက် ၂ဆပိုရရှိနိုင်ကြောင်း၊ပြည်သူများအနေဖြင့်ပဲဆီ၊နှမ်းဆီ၊ပဲပုပ်ဆီ၊ပြောင်း"ဖူးဆီ ဖွဲနုဆီအများစုမှာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှတင်သွင်းလာသော ဆီများဖြစ်ပြီးဆီဆိုး(အကြော်ကျန်ဆီ) များမှာမူ"နိုင်ငံတွင်းရှိ ဟိုတယ်တချို့နှင့် စားသောက်ဆိုကြီးတချို့မှ လာသည်ဟု ယူဆရကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ"ဟိုတယ်ကြီးများမှာ အကြော်ကျန်ဆီများကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းရောင်းချခြင်းမျိုး ပြုလုပ်ခွင့်မရှိကြောင်း ၂၀၀၉"ခုနှစ် ဧပြီလ ၂ရက်နေ့ထုတ်7day news ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
Tuesday, March 31, 2009 7:00 AM
လက်ဖက်အစိုတွင်သာမက လက်ဖက်ခြောက်များတွင်လည်းဆိုးဆေးများပါဝင်နိုင်သောကြောင့်"စားသုံးသူများအနေဖြင့် သတိပြုသောက်သုံးသင့်ကြောင်းအမျိုးသားနိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလီမိတက်"မှမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးကျော်သီဟက ပြောကြားသည်။ “ဓါတုဗေဒဆိုးဆေးပါဝင်တဲ့လက်ဖက်အစိုတွေကိုသက်"ဆိုင်ရာက စစ်ဆေးပြီးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အတွက် စားသုံးသူပြည်သူတွေအတွက် အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဓါတုဗေဒဆိုးဆေးတွေဆိုတာလက်ဖက်အစိုမှာသာမကဘဲလက်ဖက်ခြောက်မှာလည်းပါဝင်နိုင်တဲ့အတွက်စား"သုံးသူတွေအနေနဲ့ သတိပြုသောက်သုံးသင့်ပါတယ်” ဟုယင်းကသတိပေးပြောကြားသည်။ ဓါတုဗေဒ ဆိုးဆေးပါ"ဝင်တဲ့လက်ဖက်ခြောက်နဲ့ဆိုး ဆေးမပါတဲ့ လက်ဖက်ခြောက်က ခွဲရလွယ်ကူပါတယ်။ အလွယ်ကူဆုံး နည်းအနေနဲ့"လက်ဖက်ခြောက်ကို ရေနွေးဆူဆူထဲကိုထည့်လိုက်ရင် ရေနွေးအရောင်က ချက်ချင်းနီရဲလာမယ်ဆိုရင်ဆိုးဆေးပါ"တာ လုံးဝကျိန်းသေပါတယ်။ ဆိုးဆေးမပါတဲ့လက်ဖက်ခြောက်ကို ရေနွေးထဲကို ထည့်လိုက်ရင်ရေနွေးအရောင်က"စိမ်းဖန့်ဖန့်ပဲရှိပါတယ်။ ဒီထက်ပိုဆိုးတာက လက်ဖက်ရည်ဖျော်တဲ့လက်ဖက်ခြောက် (အချိုခြောက်) ပါ။ လက်ဖက်ရည်ကနှပ်ထားတဲ့ လက်ဖက်ခြောကိုနို့ဆီနဲ့ရောလိုက်တဲ့အတွက် လက်ဖက်ခြောက်ရဲ့ မူရင်းအရောင်ကိုလုံးဝမသိ"နိုင်တော့ ပါဘူး” ဟုယင်းကပြောသည်။ အဆိုပါအမျိုးသားနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းလီမိတက်မှ လက်ဖက်ခြောက်အမျိုးအစား ငါးမျိုးထုတ်လုပ်၍ ပြည်တွင်းပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီ"လ ၂ရက်နေ့ထုတ် ပြည်မြန်မာဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။"
မြန်မာနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၏ လေ့လာသုံးသပ်မှုများအရ လူကုန်ကူးသူများ"အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများတွင် ပြည်တွင်း၌ Model Girl နှင့် Fashion Show လုပ်ငန်းများဖြင့် စည်းရုံး၍အဓမ္မ
ပြည့်တန်ဆာပြုစေခြင်း ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း(ကာရာအိုအေ စားသောက်ဆိုင်၊ အနှိပ်ခန်း) များမှတစ်ဆင့် အဓမ္မ
ပြည့်တန်ဆာပြုစေခြင်းတို့ကို တွေ့နေရကြောင်းလူကုန်ကူးသူများ အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများကို ဆန်းစစ်မှုများ"အရသိရသည်။ လူကုန်ကူးခံရသူများ၏ဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာရာတွင် ဖြတ်လမ်းနည်းဖြင့် ကြီးပွားလိုသူများ၊ ယုံကြည်"လွယ်သူများ၊ အားနာတတ်သူများ၊ ဗဟုသုတနည်းပါးသူများ၊ အကာအကွယ်မဲ့သော ကလေးများ၊ နိုင်ငံခြားကိုအ"ထင်ကြီးသူများ၊ အများဆုံး ပါဝင်ပြီး အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးငယ်များသည်လူကုန်ကူးသူများအတွက်အမြတ်အစွန်း"ပိုမိုရရှိစေကြောင်း သုံးသပ်ပြထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအားလုံး၌ မန္တလေးတိုင်း၊ တနင်္သာရီ"တိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)တို့သည် လူကုန်ကူးမှုအများဆုံးဖြစ်ပေါ်သော ဒေသများဖြစ်ပြီး"မန္တလေးသည်လူကုန်ကူးမှုလမ်းကြောင်း၏ အဓိကနေရာတွင်ရှိကြောင်း မန္တလေးတိုင်း လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာ"ကွယ်ရေး အဖွဲ့မှရဲမှူး အေးစံကပြောသည်။ မန္တလေးသည် အချက်အချာကျသော လမ်းဆုံမြို့ ဖြစ်သည့်အတွက်"မန္တလေးမှတစ်ဆင့် ဗန်းမော်-မြစ်ကြီးနား- လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်းမှလည်းကောင်း၊ လားရှိုး- မူဆယ်လမ်းပိုင်းမှလည်း"ကောင်း တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ လူကုန်ကူးမှုများပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး တရုတ်ပြည်သို့ရောင်းစားခံရသောအမျိုးသမီးများ"မှာ နယ်စပ်ရှိ ကျေးရွာများတွင် ကျပန်းအလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ၏ဇနီးမယားအဖြစ်အတင်းအားဓမ္မလုပ်ကိုင်ခြင်းခံရ"ပြီး အဆိုပါလုပ်သားများ၏ဇနီးမယားများအဖြစ်မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်များသာလူကုန်ကူးခံရသူတစ်ဦးကပြန်လည်"ပြောကြားသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသို့လူကုန်ကူးခံရသူအများစုမှာအလုပ်ပေါ်တွင်လုပ်အားခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းပြည့်တန်ဆာ"လုပ်ငန်းများတွင် အတင်းအားဓမ္မ ရောင်းစားခံရခြင်းတို့ကို တွေ့ရကြောင်းလည်းသိရပြီး ဘ၀ ရပ်တည်ရန်ခက်ခဲ"သော အမျိုးသမီးငယ်များကို တွေ့ရခဲ့ကြောင်းလူကုန်ကူးခံရသူတစ်ဦးကပြောပြ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင်ဖြစ်ပေါ်"လျက်ရှိသော လူကုန်ကူးမှုများမှာ အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးသူငယ်များကို လိင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ရောင်းချ
ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများကို အားဓမ္မမယားပြုစေရန် ရောင်းချခြင်း၊ ကလေးသူငယ်များကို လိင်မှုကိစ္စ ကျူးလွန်ခြင်း၊"လိင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်အားခေါင်းပုံဖြတ် သည့် လုပ်ငန်းများတွင် ရောင်းချခြင်း၊ ကလေးသူငယ်များ"ကို အားဓမ္မမွေးစားရန်ရောင်းချခြင်းအစရှိသော ပုံစံများဖြစ်ကြောင်းလူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၏မှတ်"တမ်းများအရသိရသည်။ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုထိရောက်သည့် နည်းဗျူဟာများ ရေးဆွဲ
ပြဋ္ဌာန်းကာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အကောင်အထည်ဖော်သွားရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်းမဲခေါင်မြစ်ဝှမ်း ဒေသအတွင်း"လူကုန်ကူးခြင်းကို တိုက်ဖျက်သည့်ကုလသမဂ္ဂစီမံချက် (မြန်မာ)မှ စုံစမ်းသိရှိရကြောင်း၂၀၀၉ခုနှစ်မတ်လ၂၆ရက်နေ့ထုတ်Upper Myanmar ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြ ထားပါသည်။"
ထားဝယ်တွင် တီဘီရောဂါပိုး စစ်ရင်း HIV တွေ့ရှိမှု များပြားဟုဆို
တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်မြို့တွင် အခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေသော ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ
အခြေ စိုက်နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့ (MSF)ကတီဘီရောဂါပိုးလာရောက်စစ်ဆေးသူများကို HIV ဗိုင်းရပ်စ်
ပိုးရှိမရှိ အခမဲ့စစ်ဆေးပေးလျက်ရှိရာ HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိသူများကို တွေ့ရှိရကြောင်း MSF ၏ ထားဝယ်မြို့နယ်တာ
ဝန်ခံဒေါက်တာ မျိုးဆက်အောင်ကပြောကြားသည်။ ခုခံအားကျဆင်းစေသော HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရသူ
၇၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ တီဘီရောဂါဖြစ်ပွားလေ့ရှိကြောင်း၊ တီဘီရောဂါရှိသူအများစုမှာ ၄င်းတို့တွင် HIV ရောဂါပိုးရှိမှန်း
မသိကြကြောင်း၊ ဆေးစစ်ပြီးမှသာ HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံထားရသည်ကို သိရှိကြကြောင်း၊ HIV ပိုးကြောင့်ခုခံ
အားကျဆင်းပြီး ဖြစ်ပွားသော တီဘီရောဂါသည် သာမန်တီဘီရောဂါထက်ကုသရန် ပိုမို ခက်ခဲကြောင်း ၄င်းကဆို
သည်။ “တီဘီရောဂါရှိတဲ့လူတိုင်းတော့ AIDS မရှိပါဘူး။ AIDSရောဂါဝေဒနာသည်တွေက ခုခံအားကျဆင်းလာလို့
တီဘီရောဂါဝင်လာတာပါ”ဟု ၄င်းကဆိုသည်။ တီဘီရောဂါပိုးဟု သံသယရှိလျှင် ဆောလျင်စွာ စမ်းသပ်ကုသပေး
ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ဆရာဝန်နှင့် စနစ်တကျကုသမှုမရှိဘဲ မိမိဘာသာ မိမိဆေးဝယ်မသောက် သင့်ကြောင်း၊ ဆေး
ပတ်လည်အောင် မသောက်ပါက ဆေးယဉ်ပါးမှုဖြစ်စေပြီး ဆေးကုသရန် ခက်ခဲကာ ကုသမှုစရိတ်ကြီးမားကြောင်း
အဖွဲ့(MSF)က ထားဝယ်မြို့တွင် တီဘီရောဂါသည်များအား အခမဲ့ကုသပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ယင်းသို့ကုသရာတွင်
ခရီးစရိတ်မတတ်နိုင်မှုများကို ခရီးစရိတ်ထုတ်ပေး ကြောင်း၊ အာဟာရချို့တဲ့သည့် လူနာများကိုလည်းအစားအစာ
နှင့်ငွေကြေး ထောက်ပံ့ပေးကြောင်း၊ ဆေးပတ်လည်စွာသောက်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်ကြပ်မတ်
ပေးကြောင်း ဒေါက်တာသန်းသန်းမြင့်ကဆိုသည်။ ဆွစ်ဇာလန် MSF အဖွဲ့သည် ၂၀၀၄ခုနှစ်မှ စတင်ကာထားဝယ်
မြို့တွင် တီဘီရောဂါကို ကွင်းဆင်းကုသပေးလျက်ရှိပြီး ယခုအချိန်အထိ လူနာပေါင်း ၂၂၃၃ဦးကုိုကုသပေးပြီးဖြစ်
ကြောင်း၊ လက်ရှိတီဘီလူနာ ၃၆၆ဦးကို ကုသပေးလျက်ရှိပြီး ယင်းတို့တွင် AIDSနှင့် တီဘီ ရောဂါ ပူးတွဲလျက်ဖြစ်
နေသော လူနာ ၁၀ဦးပါဝင်ကာ MSF ကဆေးကုသပေးနေကြောင်း၊ ၂၀၀၈ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ တီဘီ လူနာကွင်း
ဆင်းရှာဖွေရေး အဖွဲ့ဖွဲ့ကာ လောင်းလုံနှင့်ထားဝယ်မြို့တို့တွင် ကုသပေးလျက်ရှိကြောင်း အဆိုပါအဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်
ချက်များအရသိရှိရကြောင်း ၂၀၀၉ခုနှစ်မတ်လ ၃၀ရက်နေ့ထုတ် The Voice ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။